ढोरपाटनको खाराखेत आसपासमा रोकिएन चितुवाको आतंक ! – ebaglung.com
२०७४ फाल्गुन २३, बुधबार २०:४५	Top News, अन्य समाचार
टिकाराम भट्टराई, बुर्तिबाङ २०७४ फागुन २३ । ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर १ खाराखेत आसपासमा चितुवाको विगविगी निकै बढेको छ । वडा नम्बर १ खाराखेत पारीपट्टी खोलापारी भन्ने ठाउँमा कृषि पेशा गर्दै आएका टिकाराम पाण्डेले पालेको लैनो जर्सी गाईको बाच्छो बुधबार बिहान चितुवाले मारिदिएको छ । पाण्डकोे ३ हप्ता अगाडी आफ्नै गोठमा पालेको एउटा लैनो भैसीको पाडो पनि चितुवाले खाइदिएको थियो । पाण्डेले ६० हजार रुपैयामा भैसी किनेको भोलिपल्ट भैसी दुहुन जाँदा चितुवाले लैनो पाडो खादै गरेको समेत देखेका थिए ।
आफ्ना छोराहरु सानै रहेकोमा यसरी दैनिक रुपमा चितुवाको बिगबिगी बढिरहदा साझँ बिहान बालबच्चा लगाएत आफुलाई समेत डर बढाएको उनकी श्रीमती मालती पाण्डेले बताईन ।
पाण्डेले केही बर्ष यता निरन्तर लैनो गाई र भैसी पाली बुर्तिबाङ बजारमा दुध बिक्री गर्दै आएका थिए । पाण्डेले गहभरी आँशु लिदै भने “यो चितुवाले पनि निकै अख्खनी नै गर्यो, २ ओटा पाडाबाच्छा मारी सक्यो अरुको पनि कुखुरा खायो रे भन्ने सुन्छु ,अति भो अब यो चितुवालाई के गर्न सकिन्छ ! यसलाई व्याबस्थापन गर्न सकिएन भने फेरी अर्को घटना घटाउन सक्छ ”।
त्यस्तै खाराखेतका एक व्यापारीले पालेको लोकल जातका तिनओटा कुखुरा,तिन हप्ता पहिले दुलेपारी भन्ने स्थानमा कुखुरापालन व्यवसाय गर्दै आएका दिल शेर्वुजाको शेर्वुजा पोल्ट्रीफर्मबाट एकै रातमा ३० ओटा लेयर्स जातका अण्डा पार्ने कुखुरा खाइदिएको थियो । त्यस्तै ४ हप्ता पहिले ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ बिस्मोरका किसान होम बहादुर बोहोराले पालेको गाईबाच्छालाई आक्रमण गरेको थियो ।
यसरी हप्तै पिच्छे खाराखेतमा कुखुरापालन गर्दै आएका दान वहादुर शेवुर्जाका ३ ओटा ,मदन घर्ती मगरले पालेको कोइलर जातका ३ ओटा कुखुरा समेत खाइदिएको थियो ।
यसरी चितुवाको आतंङ्क बढ्दै जानु र धमाधम कुखुरा खाने तथा अन्य वस्तुभाउ खान थालेपछी किसान निकै चिन्तीत बनेका छन् ।
ढोनपाले बुर्तिबाङमा यसरी मनाउँदै छ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस !